Taariikhda My Butros » 3 Tips for Xiriirka la yaab leh
Last updated: Sep. 30 2020 | 2 min akhri
Xiriirka waa waxa ugu cajiib ah aan yeelan karaan. Laakiin sida waxyaalaha muhiimka ah ee nolosha ay u baahan yihiin shaqo badan. Waa in aan hubiyo in shaqada si ay u ilaaliyaan ururka noo cajiib ah. Laakiin waxa ugu wanaagsan waa in la ah isbedel yar oo sahlan ayaan ku hubin karnaa urur shaqaale fiican iyo kuwa ugu muhiimsan a farxad noo ah iyo mid aan u jeclahay dhexeeya. Halkan waa kaliya seddex talooyin ah si ay uga caawiyaan la joogteeyo xiriir weyn:
Isgaarsiinta fure u tahay xiriirka kasta. La hadal oo noqon furan la lammaanahaaga. Haddii aadan noqon kartaa mid furan adiga xaaskaaga, ka dib oo dhan, kuwaas oo aad noqon kartaa mid furan leh? U sheeg sida aad dareensan tahay, Si kastaba ha ahaatee jeclaysan sida aad dareemayso waxaa laga yaabaa, wuxuuna u ogolaanaya inuu halkaas ka soo tagto. Waxa ugu sii dari aad sameyn karto waa in aay wax dib ka dibna sano hoos line gebi ahaanba qarxi badan wax waa in aad sheegtay sano ka hor. Haddii qof si dhab ah aad u jecel yahay ay shaqeyn doontaa iyada oo wax kasta oo aad la, xitaa haddii ay ku qaadataa waqti in. Noqo qof daacad ah oo ugu danbeyn aad kori doono dhow halkii ay kala fogeynaya.
Hayso Side ayaa Sexual of Waxyaabaha Aadista Strong
Muddo ka dib dhinaca galmada ah ee xiriirka ka bilaabi karaan in ay lunto ka maalmood ka hor marka aad heli waayey filan oo midba midka kale. Tus lover oo aad weli aad u badan qof galmada iibsato nigis sexy ama xitaa adigoo samaynaya suurto-gal hab gaar ah si aad u. Dibinta Red. Indhaha qaaca. U weli aad rabto sababta oo ah waxay weli ku sameeyo dhammaan hoose.
Waan akhriyey articles shukaansi aad u badan halka ay dadku dhihi aad u baahan tahay in lagu daaweeyo waxay u dhignaan si ay u sii dooneysa. Waxa ay u muuqataa si qaldan igu. Ka dib dhan, Waa maxay waxa dadka ugu sheegayaan in ay raadinayso? Markii lala barbar dhigo dareen kaftan, qof noocee waxaa u muuqataa in ay jawaab ugu caansan. Mararka qaarkood waxaan u maleynayaa in uu yahay waxa ka qaldan pool shukaansi ah. Waxaa jira dad aad u badan oo gashanno mask si ay naftooda u joojiyaan raadinaya sida kadiifad. Ahayd in ay ku heshay Rep xun sida tabar halkaas oo dhab ahaantii waa aalad Adag marka ay timaado xiriirka nooc u muuqataa. Diirimaadka kaas oo ka yimaadaa qof debecsan, nooc oo oo aad ogtahay in danaha ugu fiican ma isna karaan. Sidaas falid aad nolosha la wadaagto oo ay Doono jawaab raxmad. Haddii ay sidaas yeeli waayaan ay aanay u qalmin waqtiga aad. Ha tanaasulka ahaa aadanaha hufan isagoo ah qof kasta oo jacayl imaan doono albaabka oo waxaa wanaagsan wuxuu noqon doonaa badan aad abid kuwaad waxaa abid noqon kartaa.